Qoor-Qoor oo loo doortay madaxweynaha Galmudug | Xaysimo
Home War Qoor-Qoor oo loo doortay madaxweynaha Galmudug
Qoor-Qoor oo loo doortay madaxweynaha Galmudug
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta madaxweynaha cusub ee maamulkaasi u doortay, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday maagaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Qoor-Qoor ayaa ku soo baxay wareegii koowaad ee doorashada, isagoo helay 66 cod, halka musharraxii kale ee ku xigay ee Cabdullaahi Axmed Samatar uu helay 9 cod.
Sidoo kale waxaa wareegaan ku haray Cabdiraxmaan Axmed Sabriye oo helay 1 cod iyo Axmed Shire Maxamed (Falagle) oo isna helay 1 cod.
Guddoomiyaha baarlmaanka Galmudug, Maxamed Nuur Gacal oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa shaaciyey inuu xil ka madaxweynaha Galmudug ku guuleystay Qoor-Qoor, islamarkaana uu hoggaamin doono afarta sano ee soo socota.
Shanta musharrax ayaa waeeegii koowaad kala helay: Cabdiqani Sheekh Cali Diini 26 cod, Cali Daahir Ciid 26 cod, Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) 12 cod, Saadaq Cabdullaahi Xaashi 7 cod iyo Axmed Taajir Yuusuf Warsame oo isna helay 6 cod.
Sidoo kale waxaa wareega labaad u gudbay afarta musharrax ee ugu codadka badnaa wareega 1-aad, balse inta aysan bilaaban codeynta ayaa waxaa taanusalay musharraxiinta Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) iyo Saadaq Cabdullaahi Xaashi.